Keenista Carruurta iyo Iskaashatada Marka carruurtu joogaan
Waqti u qaad oo naftaada u raadso sida laba qof oo cusub
Hagaajinta hiwaayadaha iyo saaxiibtinimada!
Bilowga waxaad weli ku jirtaa jacayl, wax walbaa waa sida ay tahay. Habeenada heesaha, quraacda nalalka iyo sabtida Axada ayaad ku seexan kartaa. Sidaa u midaysan oo midaysan, wax waliba maaha habka qorsheynta qoyska.
U keenista carruurta iyo wada shaqaynta
Hase yeeshee, dhammaadka qarashka badani wuxuu ku dhammaadaa dhammaadkiisa: ma aha mid aan xidhiidh la lahayn xidhiidhka sanadka ugu horreeya ka dib dhalashadiisa. Qaylo-dhaanta caruurnimada, murugada, habeenkii hurda, dhammaantood waxay u badan tahay in ay wax badan u qabtaan lammaanaha dhallinyarada ah marka loo eego kuwa ka shakisan yahay. Hase yeeshe, qof waliba wuxuu yiraahdaa wakhtiga ilmuhu yaryahay waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan.
Miisaamidda iskaashiga iyo qoyska
Qof kasta waa inuu marka hore u adeegsado doorkiisa cusub
Ilmo micnaheedu waa inuu qaado masuuliyada. Ma aha wax dhaqaale oo kaliya oo qallafsan qoyska da'da yar. Iyada oo ilmo yar ayaa sidoo kale isbedelaya doorka aad ku leedahay xiriirka. Si dhaqsiyo leh, haddaad tahay saaxiib, ninkayga ama xaas, laakiin hooyo ama aabe, oo aad leedahay masuuliyad kale.
Haddii naagtu guriga ku jirto, ninka hadda waa inuu daryeelaa xaaskiisa iyo ilmihiisa. Rag badan ayaa aqoonkani cadaadis ku saaran yahay sababtoo ah goob shaqo maaha sida iska cad sida maanta loo isticmaalo. Haweeneyda, dhanka kale, waa in ay go'aan ka gaarto in ay nafteeda ku kalsoon tahay in ay daryeeleyso ilmaheeda ama dib ugu noqoto in ay shaqeyso wakhti cayiman, iyo in cunuga loo dhigo muddo dheer.
Haddii ay go'aansato in ay halkaa u noqoto faraceeda, waxay ku allabaryeysaa shakhsiyaddeedii hore oo ay soo martay xaalad cusub oo cusub. Wax walbaa mar walba ma ahan mid daalan waqtigan, xitaa haddii hooyada dhalinyaradu ay ku faraxsan tahay kaalinteeda. Ilmaha habeenkii ooyaya ooyaya sababtoo ah colic ama ilkaha ilkaha yar, adoo la wadaagaya lammaanaha, hubin la'aanta, haddii aad sameyso wax kasta oo sax ah, iyo sidoo kale isbedelka hoormoonka wuxuu mar kale ku celiyaa dhulka.
Ku qanacsanaanta aabbaha
Nolosha nolol maalmeedka aabah cusub ma baddalayso sida dhabta ah ee hooyada. Si kastaba ha ahaatee, marka uu guriga yimaado, si dhif ah ayuu u salaamay isagoo ku faraxsan "Hello martiqaad, sida maalin ahayd!", Laakiin waxaa laga yaabaa inuu ka helo xaaskiisa murugaysan sida ugu fiican, iyada oo aan wax faallo ah, farcankiisa ku riixay gacmihiisa.
Guud ahaan, indhahiisa, haweeneyii hore u daryeeshay waxay u egtahay inay si buuxda u bedeshay. Badanaa ragga ayaa xitaa si xushmad leh uga sheekeynaya faraca. Ilmuhu marka hore waa inuu yimaadaa - sidaas awgeedna wuxuu noqon doonaa ilaa ilmuhu ka cararo.
Marka ugu horreysa aabayaasha da'da yar waa inay u isticmaalaan. Halkan waxa ay qaadataa wax badan oo sabir ah, geesinimo iyo heshiis wanaagsan oo dulqaad, sidaas darteed guurka kuma guulaysan. Lammaane aad u yar ayaa leh carruur ay seexdaan saddex toddobaad kadib!
Muddo ka dib, qofku wuxuu badanaaba isku arka mid ka mid ah doorkiisa cusub oo uu aqbalo in lamaane, waa inuu sidoo kale dib u cusbooneysiiyaa naftiisa. Sidaa daraadeed, dhammaan hooyooyinka da'da yar iyo aabbayaashu waa inay si joogto ah ula dhaqmaan - iyo bilawga bilawgaba - wada jir. Xaqiiqdii waxaa jira awooweyaal kuwaas oo la wareegaya doorka ilmo-haynta ilmaha bil kasta, xitaa xitaa laba jeer. Haddii kuwani aanay ku noolayn goobta, waxaad dhageysan kartaa goobada dadka aqoonta u leh. Xaqiiqdii qof baa ogyahay ilmo-ilaaliye la aamini karo oo aan qaali ahayn.
Ama qoysaska da'da yari waxay isu taageen midba midka kale. Waxaa laga yaabaa in qof ka socda xaafada uu sidoo kale bixiyaa daryeelka ilmaha. Qaado kaalmo halkan! Iskaashatada waxay ka faa'iideysanayaan waqtigan la wadaago mudada dheer.
In iskaashi, qof walba waa, inkastoo dhalinyarada, sidoo kale waxay leeyihiin waqti, waayo, hiwaayadaha isaga u gaar ah. Halkan hawlgalayaasha waa in uu buuxiyaa, maxaa yeelay, halka mid ka mid eryanayn hiwaayadaha uu, jidhka yaraynaysaa stress iyo nasto karaa batari aad. Isla sidaas u dhaqmaan saaxiibo. Inta badan saaxiibtinimada muddo dheer dhibaato ay ka soo la'aanta ah ee wakhtiga waalidka, gaar ahaan marka ay saaxiibo is-weli carruurta iyo ma fahmi kartaa marka aad daasho habeenkii inuu u soo yeedho muddo dheer yihiin.
Carruurta iyo iskaashiga
Sidoo kale halkan: Jadwal waqtiyo go'an. A: "Mar labaad baannu ku kulmi karnaa wakhti" ka caawinno qofna. Gaar ahaan kulanka saaxiibada iyo beerashada hiwaayadaha badanaa waa mid aad u gaaban, halkan waxaad ka heli doontaa gabal dib u aqoonsigiisa. Farshaxanka weyn ee qoyska dhalinyarada ayaa sidaas ah, marka lagu daro nolol maalmeedka caadiga ah, taas oo dabcan sidoo kale leh daqiiqad aan la ilaawi karin oo lagu bixinayo jasiiradaha si ay u abuuraan oo u buuxiyaan beteriyadaada halkan.
Talada guurka ee guurka
Haddii dhammaan arimahan aanay caawinin ama aysan jirin waqti ku filan, waxay sidoo kale macquul noqon kartaa in ay caawimaad ka hesho xirfadle. Khabiirada cilmu-nafsiga waxay badanaa bixiyaan la-talin guur oo si deg-deg ah u muujinaya sababta, dhibaatada hoose. Dabcan, lammaanuhu waa inay naftooda ka shaqeeyaan, laakiin haddii xiriirkoodu yahay wax qiimo leh, waa inaysan qarin oo iska qaadin nafta maalinlaha. Sababtoo ah, dabcan, ma ahan kuwa dhasha in lagu eedeeyo dhibaatooyinka, laakiin awooda waalidiinta ee wax ka qabta diiqada.
Gabay Erotic ah Jacaylka jacaylka